कस्तो खाना राम्रो हुन्छ मृगाैलाका निम्ति ? | Infomala
कस्तो खाना राम्रो हुन्छ मृगाैलाका निम्ति ?
अचेल मिर्गौला असफल भएका रोगीको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । मिर्गौला प्रत्यारोपणको व्यवस्था भए पनि त्यसमा पहुँच नहुने र मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न नमिल्ने अवस्थाका रोगीले चाँडै मृत्युवरण गर्नुपर्ने सम्भावना हुन्छ । असफल भएको अवस्थामा मिर्गौलाले रगतबाट फोहर वस्तु छानेर पिसाब बनाउन सक्दैन र रोगीको जीवन जोखिममा पर्दछ । मिगौलाको स्वास्थ्य बिगार्नमा प्रमुख कारणमा पर्छ, मधुमेह र उच्च रक्तचाप । यी शारीरिक समस्या वास्तवमा आहारविहारसँग सम्बन्धित छन् । राम्रो र सन्तुलित नखाने र अस्वस्थ जीवन जिउनेलाई मधुमेह र उच्च रक्तचापको खतरा अधिक हुन्छ । त्यसैले मिर्गौलालाई लामो समय स्वस्थ राख्न पर्याप्त मात्रामा पानी पिउने, व्यायाम गर्ने तथा बजारका खाद्यवस्तु भन्दा आफ्नो भान्सामा पकाइएको खाना खानुपर्छ । साथै विभिन्न खालका प्रदूषणबाट जोगिनु पर्दछ । रासायनिक प्रदूषणले मिर्गौलामा गम्भीर प्रभाव पार्नसक्छ ।
कुरिलोः हाम्रो मूत्र प्रणालीका लागि कुरिलो सर्वोत्तम खाद्य वस्तु मानिएको छ । कुरिलोमा हुने ग्लाइकोसाइड्स र सापोनिन्स नामका तत्वले मूत्रप्रणालीलाई सबल पार्छ । यी तत्वमा पिसाब निकाल्ने, रगत स्वच्छ पार्ने र अन्य विषाक्त तत्व बाहिर निकाल्ने गुण हुन्छ । नियमित रूपमा कुरिलो खाने गरेमा पिसाब बढी उत्पादन हुन्छ, मिर्गौलाका कोषको सक्रियता बढ्छ र पत्थरी बनाउने नुन र अम्ल पनि विलिन हुन्छन् ।
लसुनः लसुनलाई प्रकृतिको एक प्रमुख रोगनाशक वस्तु मानिएको छ । लसुनमा हुने सल्फर यौगिक एलिसिनले रोगाणुलाई नाश गर्छ । अनुसन्धानबाट यो प्रमाणित पनि भएको छ । ब्याक्टेरिया, भाइरस, ढुसी, परजीवी नष्ट गर्न प्रभावकारी हुने लसुनमा क्यान्सरविरोधी एन्टिअक्सिडेन्ट गुण पनि हुन्छ । एलिसिनले मिर्गौला रोग उत्पन्न गर्ने दुई मुख्य दोष मधुमेह र उच्च रक्तचाप नियन्त्रणमा भूमिका खेल्दछ । फर्माकोलोजिकल जर्नलमा सन् २००८ मा प्रकाशित एक अनुसन्धानको विवरणमा जनाइए अनुसार मक्र्युरी क्लोराइडको प्रभावले गर्दा मिर्गौलामा क्षति पुग्ने खतरा लसुनले घटाउँछ । क्यान्सरजन्य तत्व मक्र्युरी क्लोराइडलाई कीटनाशक, ब्याट्री आदिमा प्रयोग गरिएको हुन्छ ।
खरभुजाः पोटासियम र फस्फोरस कम हुने भएकाले मिर्गौलाका लागि खरभुजा उपयुक्त छ । पोटासियम र फास्फोरस खनिजले मिर्गौलमा प्रभाव पारेर त्यसको क्रियालाई असन्तुलित पार्छन् । त्यस्तै, खरभुजामा नुनिलो गुण भएको पानी ९२ प्रतिशत हुने भएकाले मूत्र प्रणालीको सफाइमा यसले ठूलो योगदान पु¥याउँछ । पत्थरी भएकाले पनि खरभुजा खाएर ठूलो लाभ लिन सक्छन् । खरभुजा खानेको कलेजोले सजिलैसँग अमोनियालाई विघटित गरेर युरिया बनाउँछ र रक्तसञ्चार प्रणालीबाट मिर्गौलामा पठाएर पिसाबको माध्यमबाट बाहिर निकाल्छ । तर, कुरिलो र लसुनको दाँजोमा खरभुजामा चिनी बढी हुने भएकाले मधुमेह रोगीले खरभुजा धेरै खानु हुँदैन । एजेन्सी
Previous Postबालबालिकाको मानसिक विकासमा रसायनको प्रभाव
Next Postशरणार्थी दुर्व्यवहारबारे जर्मनीमा छानवीन